Waa kuma Cabdirashiid Janan? - BBC News Somali
2 Sebtembar 2019
Image caption Wuxuu ka mid yahay wasiirrada aan dhicin ee maamulka Jubbaland
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay inay xabsiga dhigtay Cabdirashiid Janan, wasiirka amninga ee Jubaland. Dowladdu waxay sheegtay in Cabdirashiid Janan loo haysto "dambiyo culus" oo uu galay.
Kuxigeenka taliyaha booliska ee Soomaaliya, Sareeye-guutoZakiya Xuseen, waxay barteeda Twitter-ka soo dhigtay: "Ciidanka Boliiska Soomaliyeed ayaa taariikhdu markay ahayd 31/08/2019 soo xiray eedeeysane Cabdirashiid Xassan Nuur 'Janan' kaasoo ku eedaysan dambiyo culus."
Dowladda wali ma bixinin faafaahin ku saabsan in maxkmad la soo taagi doono Janan iyo In kale.
Bartamihii sagaashameeyadii ayuu isagoo da'yar waxa uu ku biiray ururkii Al-Itixaad ee gobolka Gedo kaas oo waqtigaas la dagaallamayay ciidammada Itoobiya ee gacanta siinayay kuwii ururkii SNF ee la wareegay degmooyiinka Baledxaawo, Doolow iyo Luuq ee gobolkaasi.
Image caption Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, Wasiirka Amniga ee Jubbaland
Mudadii uu maamulayay magaalada wuxuu wax badan ka qabtay ammaanka iyo in xarun uu degmada uga dhigay hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya Koonfurta Soomaaliya taas oo fursado shaqo u abuurtay dhalinyarada deegaankaasi.
Image caption Cabdirashiid Janan wuxuu ka mid yahay wasiirrada ugu awoodda badan maamulka Jubbaland
Eedahaas waxaa ka mid ah dagaal bartimihii sannadkii 2016 ka dhacay magaalada Baledxaawo halkaas oo lagu dilay laba qof iyo lix kalana lagu dhaawacay ka dib markii "ciidammada Jubaland ay weerrareen maleeshiyo ay sheegeen inay isku uruursanayeen magaalada".
Saraakiisha kale ayuu magacyadoodu ku sheegay Farxaan iyo Macalin Isxaaq oo "qaraxyada Kismaayo u qaabilsanaa" ururka.
Maamulka Jubbaland ayaa sharci darro ku tilmaamay go'aankii ay dowladda Federaalka Soomaaliya xabsiga ugu taxaabtay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, waxa ayna si degdeg ah u codsatay in la sii daayo.
Jubbaland ayaa sheegtay in ay aad uga walaacsan tahay "nolosha, amniga iyo badqabka" wasiirka Muqdisho lagu xiray.
Image caption Isagoo Wasiir ah ayuu si joogto ah ugu noqon jiray Doolow oo Gudoomiye uu ka ahaan jiray
"Waxaan dooneynaa inaan ogaanno xaaladda uu ku sugan yahay wasiirka, meesha lagu hayo iyo sababta loo qabtay intaba", ayuu yiri Injireen Cabdi.
Wuxuu intaa ku daray in dalabka uu ku aaddan yahay cid walba oo ku lug leh xarigga Cabdirashiid Janan, wuxuuna yiri: "Waa inaan fahanno sharciyadda loo maray xiritaankiisa, war saxaafadeedkeennana wuxuu ku socdaa ciddii ka dambeysay qabashadiisa; dowladda Federaalka iyo garsoorka. Waan damacnay in aan la hadalno dowladda laakiin way diideen inay ka hadlaan arrintaas, wasiirkana meel lagala xiriiri karo ma jirto".
Go'aankii Maxkamadda Gobolka Banaadir ay ku cafisay Janan
"Meesha la yiraahdo Baydhabo doorashaa ka socota, waxa ka jirana waad ogtihiin, baabuur dad laga soo hormariyo, 20 wasiir oo la'isku soo daro. Anagana doorasho ayaan u soconaa, qof kii raba in uu doorasho galo waxaan ogolnahay isaga oo nabad ah, oo shaqsi ah in uu garoonkaas kasoo dego, ma dhibaateyneyno, xaq buu leeyahay", ayuu yiri Janan.
Wuxuu intaa ku daray: "Laakiin waxa dadka qaarkiis lagula dhaqanayo ciddii nagula dhaqanta awood baan u leenahay in aan garoonka ka celino".
"Qofka doonaya in nidaamka aan ku shaqayno mid aan ahayn uu meeshan ka sameeyo, waa in marka hore uu inaga na xaaqo; haba na buufiyo haddii uu rabee. Qaab awoodeed haddii aan dareeno, waxaan waddano bakoorado ma ahan," ayuu yiri Cabdirishiid oo u muuqday in uu muujinayay in Jubbaland ay hubeysantahay.
Maqal Mas'uuliyiin loo xiray maxaabiis lagu dilay Belad Xaawo